Fikasana fikomiana :: Tsy mampihetsi-bolomaso an’ireo lehiben’ny polisy ny resaka miely • AoRaha
Fikasana fikomiana Tsy mampihetsi-bolomaso an’ireo lehiben’ny polisy ny resaka miely
Miatrika sady tsy hanaiky tsindry. “Tsy manohin­tohina ny fizotran’ny asa eto anivon’ny minisiteran’ny Fila­minana anatiny ny voalaza fa fisian’ny polisy mikononko­nona fikomiana”, hoy ny fanambaràna avy amin’ny Polisim-pirenena, omaly, manoloana ny fisian’ireo polisy tsy faly amin’ny famindran-toerana na fanagadrana ireo namany, tato anatin’ny volana vitsy izay.
“Tsy afaka manamarina na mandiso an’io tranga io izahay. Hisy kosa ny fanadihadiana lalina mahakasika izany. Raha toa ka voaporofo ny fisiany dia hisy ny fepetra horaisina”, hoy hatrany ilay fampitam-baovao. Tsy ma­naiky lembenana, noho izany, ireo tompon’andraikitra lehiben’ny Polisim-pirenena ireo.
Manodidina ny dimy ambin’ny folo ny isan’ireo polisy naiditra am-ponja vonjimaika hatreto vokatry ny fanahiana ho fanaovana asan-jiolahy sy fandikan-keloka isan-karazany. Am-polony ihany koa ireo nahazo sazy famindran-toerana sy ny maro hafa. Nanao sonia fanekena handray andraikitra ireo lehiben’ny polisy manerana ny Nosy tafavory teny Ivato, iray volana lasa izay.
Betsaka ireo fanakianana nahazo ny Polisim-pirenena nandritra ny taona maromaro.Tsy mbola nahitam-baliny ny raharaha Antsa­kabary, izay nahavoampanga polisy am-polony maro nandoro trano an-jatony maro sy nahafaty vehivavy antitra iray kilan’ny afo. Ny raharaha Maroantsetra vao volana vitsy lasa ka, izay nahavoatonona polisy ho namono nahafaty lehilahy iray. Ny raharaha niampangana ireo polisy, tany Toliara, namono nahafaty ny mpitsara Rehavana Michel, taona vitsy lasa izay manginy fotsiny. Fehiny, tsy manaiky kiantranoantrano intsony ireo mpitantana ny polisy ankehi­triny. Noho izany antony izany ve no mahatonga ireo polisy miketrika fikomiana
sa antony hafa?